Ahoana no hikarakarana sy hamahanana alika tsy ampy sakafo | Alika Manerantany
Susy fontenla | | Fahano alika sy alika kely, Alika ankapobeny
Mihaona izahay indraindray alika izay nilaozana teny an-dalambe ary tsy ampy sakafo izy ireo. Andraikitry ny miezaka ny hamerina amin'ny laoniny ny alika io, fa ambonin'izany rehetra izany dia tsy maintsy fantatsika ny fikarakarana sy ny famahanana ny alika tsy ampy sakafo.
Mampalahelo fa isan'andro dia alika maro kokoa no ilaozana ary izany no ahitantsika an'io karazan-javatra io. Mamahana alika tsy ampy sakafo Asa tsara fa tsy tokony hatao amin'ny lafiny rehetra. Noana ilay alika ary mety tsy vonona hihinana sakafo na sakafo lehibe ny kibony. Zava-dehibe ny fahalalana ny fomba hamahanana sy hikarakarana azy mba tsy harary izy.
1 Ny alika tsy ampy sakafo
2 Mandehana any amin'ny vet
3 Mamahana ilay alika tsy ampy sakafo
4 Fikarakarana alika tsy ampy sakafo
5 Miverina any amin'ny vet
Ny alika tsy ampy sakafo
Ny alika tsy ampy sakafo dia hanana olana ara-pahasalamana maro. Mazava ho azy fa ho hitantsika ny taolan-tehezany ary ho hitantsika fa ambany be ny lanjany. Ireo alika ireo dia manana fiarovana ambany, ka mety tratry ny aretina ianao. Matetika ny olan'ny hoditra sy ny palitao, satria tsy manana otrikaina ilaina izy io mba ho tonga amin'ny toe-piainana tonga lafatra.
Fambara iray hafa an'ny alika izay manana an'io olana io dia ny fahalemena. Ny alika tsy mihinana firy dia ho torana lava, ka ara-dalàna ny andro voalohany zara raha mihetsika sy matory be izy ireo, satria tsy hanana tanjaka hilalao. Betsaka aza no mahita fa sarotra ny mijoro. Ireo alika ireo koa dia mety mandoa sy mivalana matetika. Izany dia mitranga satria ny tsy fahampian-tsakafo no nahatonga ny kibo ary satria ny alika dia mihinana ny zavatra hitany rehetra, izay matetika ny fako sy ny zavatra mankarary ny vavony.
Mandehana any amin'ny vet
Arakaraka ny toetran'ny alika no ahafahantsika mikarakara azy io mivantana ao an-trano na hisy izany mamelona azy amin'ny ray aman-dreny any amin'ny toeram-pitsaboana. Na izany aza, ny fitsidihana an'ireto matihanina ireto dia ilaina foana hamaritana ny toe-piainan'ny alika. Ny alika tsy ampy sakafo dia mety hijaly amin'ny aretina maro na nihinana zavatra izay manimba azy ireo. Izy ireo dia afaka manana ny zava-drehetra manomboka amin'ny scabies ka hatramin'ny distemper hatramin'ny anemia. Samy hafa ny tranga tsirairay, koa tsy maintsy mametraka ny tenantsika eo am-pelatanan'ny matihanina foana isika, izay afaka mitarika antsika kokoa amin'ny fikarakarana an'io alika tsy ampy sakafo io. Ny mpitsabo biby dia tsy hijery ireo aretina mety hitranga fotsiny, fa hanisy fiheverana ihany koa fa mety misy tsy fahampian-tsakafo amin'ny zavatra iray hametraka azy amin'ny sakafo manokana, zavatra izay tsy fantatsika. Matetika, alika ireo dia omena fitsapana ra amin'ny fizahana fahasalamana ankapobeny.
Mamahana ilay alika tsy ampy sakafo
Ny sakafo dia ampahany lehibe amin'ny famerenana amin'ny alika tratry ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny alika dia ao amin'io fanjakana io noho ny tsy fisian'ny sakafo mandritra ny fotoana maharitra. Tokony hotadidintsika anefa izany tsy resaka famelomana alika be loatra ilay alika. Mifanohitra amin'izany no tokony hitandremantsika tsara rehefa manome sakafo azy mba tsy hijaly amin'ny vavony, fivalanana na handoa ka mety hampalemy azy kokoa.
Acana Puppy Large Breed ...
ACANA Puppy Small Food ...
Tsy maintsy mividy fahana kalitao ianao. Ny dokotera mpitsabo dia afaka manome tolo-kevitra sakafo sasany hanampiana azy ireo amin'ny fahasitranana, satria misy namboarina manokana ho an'ity tanjona ity. Matetika ny fampiasana a Mieritreritra alika kely aho. Ireto feed ireto dia feno otrikaina ho an'ny alika maniry, manampy ny alika tsy ampy sakafo ho sitrana, na dia ny alika olon-dehibe aza. Ho fanampin'izany, mazàna ireo feed ireo dia malefaka kokoa ary kely kokoa, tonga lafatra amin'ny alika malemy. Tsy maintsy afangaro eo anelanelan'ny maina sy lena ny fahana mba hanomezana tavy sy rano bebe kokoa an'ilay alika.
Ho an'ny intakes, izy ireo dia mila ho kely sy elanelana mba hahafahan'ny alika manao fandevonan-kanina tsara. Ny fihinanana tokana dia tsy tokony hatao iray andro, satria mavesatra kokoa amin'ny vavony izany ary mety tsy handany fandevonan-kanina na handoa tsara. Amin'ny alàlan'ny sakafo kely dia alain'ny maso alika tsara kokoa izy io ary hanana angovo mandritra ny andro. Tena ilaina koa ny manome rano madio sy madio mandritra ny andro. Indraindray dia asaina omena zava-pisotro misy alika mineraly ilay alika mba hanampiana azy ho sitrana raha voan'ny fivalanana izy.
Fikarakarana alika tsy ampy sakafo
Ilay alika tsy ampy sakafo dia tsy vitan'ny hoe mila sakafo isan'andro mba ho sitrana. Zava-dehibe ny hanomezanay anao koa fifampitokisana sy fifankatiavana isan'andro. Matetika ireo alika nilaozana ireo dia mampiahiahy amin'ny voalohany, fa rehefa manomboka mandray fikarakarana izy ireo dia hahita fiovana amin'ny toetrany isika, zavatra iray izay tsy maintsy jerentsika ihany koa. Alika maro no malemy ka tonga hatramin'ny fijanonany sakafo intsony, satria izy ireo koa dia mety halahelo ary ny toe-pon'izy ireo dia manisa betsaka amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
Tokony hanome anao a toerana maina sy mafana hatoriana isan'andro ary miala sasatra. Ny alika tsy ampy sakafo matetika dia reraka sy malaindaina mandritra ny fotoana kelikely, noho izany dia ilaina ny manome azy ireo toerana hipetrahana sy hahazo aina.
Etsy ankilany, ireo alika ireo dia mety manana olana amin'ny hoditra. Zava-dehibe izany omeo fandroana tsara izy ireo ary ando hodioma anatiny sy ivelany. Raha manana scabies na olana hafa izy ireo dia hanome antsika ny fitsaboana sahaza sy toro lalana tokony harahina ny mpitsabo biby. Raha palitao simba noho ny tsy fahampian-tsakafo fotsiny dia ho hitantsika fa hihatsara tsikelikely izy io. Ireo alika ireo dia mety manana teboka sola na tsy fahampian'ny volo, saingy haverin'izy ireo indray izany amin'ny farany.
NaturVet - Fitsaboana...
Dingana lehibe iray hafa ahaveloman'ireto alika ireto ny fanatsarana ny rafi-pandevonan-kanina. Androany dia misy probiotika misy alika izay manana olana amin'ny tsinay. Ireo probiotika ireo dia manampy ny alika hamerina ny flora-tsinay sy ny fahasalamany, hany ka voafoka tsara ireo otrikaina raisiny.
Miverina any amin'ny vet
Na dia hitantsika aza ny fanatsarana miandalana ny alika, ny marina dia zava-dehibe izany tsidiho matetika ny dokotera. Ity mpitsabo biby ity dia hilaza amintsika raha mandroso tsara isika ary raha nihatsara ny fahasalamany tamin'ny lafiny rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fikarakarana sy famahanana alika tsy ampy sakafo
FERNANDO BASAURI RAMIREZ dia hoy izy:
Famerenana tsara momba ny alika tsy ampy sakafo, ny hevitro dia ny karazana torohevitra maika momba ny vonjy taitra tokony hampidirina alohan'ny hitondrana azy any amin'ny mpitsabo biby, toy ny; Inona no sakafo atoro anao, (Marika mora hita eny an-tsena, ary koa sakafo inona no tokony hialana)
Valiny tamin'i FERNANDO BASAURI RAMÍREZ
Ireo mpikaroka alika
Vitamina ho an'ny alika